Mitandrema ny mpizahatany: heloka ny mandrora any Kyrgyzstan
Home » Vaovao momba ny dia an-kolontsaina » Mitandrema ny mpizahatany: heloka ny mandrora any Kyrgyzstan
Tao anatin'ny 9 volana voalohan'ny taona 2019, ny mpitsidika sy ny mponina ao Kyrgyzstan nandoa onitra 5.8 tapitrisa soms ($ 83,000) noho ny fandrorohany am-bahoaka.
Raha atambatra, amin'ity vanim-potoana ity, araka ny andininy faha-53 amin'ny fehezan-dalàna momba ny heloka bevava ao Kyrgyzstan momba ny fanitsakitsahana mandrara ny fandrorana, fofona orona, famafazana voa ary fifohana sigara amin'ireo toerana tsy tokony ho izy, dia polisy miisa 11,500 1.4 no voasoratra. Raha ny filazan'ireo protokolola ireo dia nisy onitra 20,050 tapitrisa soms (XNUMX XNUMX $) no naloa.
Tamin'ny 1 Janoary 2019, nisy lalàna vaovao momba ny fiarovana ny filaminam-bahoaka tany Kyrgyzstan. Ny fehezan-dalàna momba ny fanitsakitsahana dia misy ny lalàna izay mahatonga ny fandrorana amin'ny arabe dia tsy ara-dalàna, izay nahatonga ny fitarainan'ny besinimaro. Ny mpanohitra an'io lalàna io dia nanambara fa ny sazy 5500 soms ($ 79) dia tsy mitombina, raha jerena ny karamany kely amin'ny mponina ao Kyrgyzstan.
Ho valin'ny fampidirana ity lalàna ity, nanomboka nampakatra horonantsary niaraka tamin'ny rora ny tompon'andraikitra amin'ny tambajotra sosialy ny mponina.
Taty aoriana, nahenan'ny manam-pahefana ny sazy hatramin'ny 1,000 soms ($ 14.30) ary nanitsy fa ny fandrorana sy ny fofona orona dia tsy 'fanitsakitsahana' raha ampiasaina mosara, napkin na fitoeram-pako.
Nanampy an'i Bengaluru ao amin'ny tambajotrany India ny Ethiopian Airlines
United Airlines dia mandefa sehatra fidiram-bola hanomezana kilometatra maro ho an'ny fiantrana